GvSIG 2, mmetụta mbụ - Geofumadas
GvSIG 2, nke mbụ
Nọvemba, 2008 GvSIG
N'ime ụzọ anyị siri kpebie ịnwale ụdị GvSIG ọhụrụ, nke agbanyeghị na ekwuputabeghi na ọ kwụsiri ike, ọ ga-ekwe omume ibudata ihe owuwu dị iche iche iji hụ nke na-efegharị.
M ebudatara 1214, na agbanyeghị na m tụrụ anya na m ga-anwale ihe atụ arụmọrụ nke isi na ahịrị dị ka ọ gwala m xurxoOdika m aghaghi igbali 1218. Ndi a bu ihe mbu:
N'ezie, ọ bụ oge iji meziwanye iconography nke bụchaghị onye egwu.
2. Ngwa ngwá ọrụ
Ugbu a ọ ga-ekwe omume igosi ma ọ bụ zoo ogwe ngwaọrụ, nke yiri ka kama ịbụ ndọtị agbatị ha nwekwara ngalaba otu. Enwere ike ịhụ ndị a dị ka nhọrọ n'oge ntinye.
Achịkọtala ụfọdụ ihe ndị dị na menu dị elu ebe enwere ike itinye ha n'ọrụ maka ụdị edo edo dị iche iche.
(Enyemaka) Ọ bụ ezie na o yighị ka ọ bụ chm, enyemaka ahụ nwere ọdịdị ahụ ma nwee ike ịnweta n'enweghị ihe na-eme nchọgharị pdf akwụkwọ ntuziaka
3. Ihe mgbakwunye
(KML) Ugbu a mgbe itinye a oyi akwa, na mgbakwunye na GML, SHP, DWG, DGN na raster e kwukwara nhọrọ Ibu Ibu a kml, ma m na-adịghị ahụ ka o kwe omume mbupụ a format.
(Iwu) E tinyela ụfọdụ iwu iwu ọhụrụ, dị ka igwe na usoro. Ọzọkwa ugbu a ọ ga - ekwe omume ịhụ iwu nke ndọtị ya anaghị arụ ọrụ dị ka mgbawa, sonye, ​​gbajie, gbatịa na ndị dị na ụdị gara aga belụsọ ma ị gara na ndọtị wee rụọ ọrụ ha ... ị gaghị ama na ha dị.
(N'ihe dị iche iche) Na mgbakwunye na ndozi na arụmọrụ oyi akwa, e mepụtara ọtụtụ arụmọrụ maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi, gụnyere nhazi, nchịkọta band, nkọwa nke mpaghara nke mmasị na profaịlụ oyiyi.
(Topology) Ọ bụ ezie na ndọtị a abụghị naanị maka ụdị 2, anyị nwalere ma n'ezie, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ụdị aka ochie na topology na usoro, usoro iwu yana ọnụọgụ nnabata ole na ole nabatara.
4. Maka mgbe
Naanị Chukwu matara, ma eleghị anya izu na-abịa ka ha na-ekwu mgbe ha nwere olile iji wepụta ụdị kwụsiri ike.
Previous Post«Previous A Gold GIS na-aga na 2 ụbọchị
Next Post November agawala, nchịkọta nke ọnwaNext »
2 na-aza "GvSIG 2, ihe ngosi mbụ"
Enweghị m ọtụtụ mmụba n'akụkụ a, n'ezie ụmụ okorobịa si Geomatic blog kwesịrị ịmatakwu ihe
Mario Martinez kwuru, sị:
Ndewo ndị Cartesia forum, na-arụ ọrụ, na mgbakwunye na iji Arcgis (anyị nwere ikikere pere mpe (ị nwere ike iche n'echiche ihe ha bara uru), anyị na-ejikwa GVsig maka obere ọrụ.Ajụjụ m bụ ma ọ bụrụ na ị maara ihe mbipụta eserese eserese nke 2 nwere, n'ihi na m na-eji nwere kama dara ogbenye mgbe ọ na-eweta na itinye "mara mma" gbaa ...?